Natiijooyinka Kulamada Premier League, Liverpool Iyo Chelsea Oo Ku Dhameestay Afarta Sare Inkastoo Blues Laga Badiyay
HomeWararka CiyaarahaNatiijooyinka Kulamada Premier League, Liverpool iyo Chelsea oo ku dhameestay Afarta Sare inkastoo Blues laga badiyay
Waxaa la ciyaaray kulamadii ugu danbeeyay ee Horyaalka Premier league iyadoo aad loo daawanayay kulamada Chelsea, Liverpool iyo Leicester city oo isku heestay boosaska 3aad iyo 4aad lakin waxaa laga badiyay Chelsea iyo Leicester City taasi oo keentay in Blues ay soo gasho booska 4aad ee loogu soo baxo champoins league.
Aston Villa ayaa gurigeeda ku garaacday kooxda Chelsea ciyaar ku dhamaatay 2-1 waxana Blues goolka qura ee la timid u dhaliyay xidiga Ben Chilwell.
Chelea ayaana horyaalka kaga dhameesatay booska 4aad iyadoo ku soo gabagabeesay guuldaro.
Dhanka kale kooxda Leicester City ayaa guul daro kala kulantay kooxda Tottenham goolashad kulankan ee Tottenham waxaa labo kamid ah u dhaliyay Bale halka labada kale ay kala dhaliyeen Harry Kane iyo gool ay leicester city ay iska dhalisay waxana dhanka Foxes labada gool u dhaliyay Jamie Vardy kuwaasi oo rigoore ahaa.
Reds oo xili ciyaareedkan qeybtiisa danbe soo bandhigtay kubad liidata ayaa horyaalka kaga dhameestay kaalinta 3aad kadib guul ay ka gaartay kooxda Crystal Palace.
Liverpool labada gool ee kulankan waxaa u saxiixay Sadio Mane, kaasi oo kooxdiisa ka caawiyay u soo bixitaanka champions league madama ay ku dhameesteen booska 3aad.
dhanka kale Manchester city ayaa 5-0 kaga badisay kooxda Everton halka Man United ay 1-2 uga badisay Wolverhampton Wanderers ciyaar la nasiyay badi xidigaha kooxda.
ugu danbeyn kooxda Tottenham ayaa aad u caawisay kooxda Blues madama guusha ay gaartay sabab u aheyn u soo bixitaanka chelsea ee Champions league.